Wararka - Falanqaynta batteriga lithium iyo warshadaha gawaarida tamarta cusub
Marka la eego horumarka soo kordhaya ee gawaarida tamarta cusub, 2.2 milyan oo gawaarida korontada ku shaqeeya ah ayaa loo iibiyay adduunka oo dhan sanadka 2019, koror ah 14.5% sanadkiiba, taasoo u dhiganta 2.5% wadarta iibka gawaarida. Dhanka kale, marka laga hadlayo iibinta baabuurta tamarta cusub, BYD ayaa ku jirta kaalinta labaad Tesla. 19 sano gudahood, Tesla wuxuu iibiyey 367820 baabuur koronto, oo kaalinta koowaad ka galay adduunka, taas oo ka dhigan 16.6% wadarta guud.
Shiinaha waa dalka ugu soo saarka iyo iibinta gawaarida cusub ee tamarta. Sannadkii 2019, Shiinaha ayaa yareeyay kaabista baabuurta tamarta cusub. Qiyaasta iibka ee gawaarida tamarta cusub waxay ahayd 1.206 milyan, hoos ayey u dhacday sanadkii 4%, taasoo ka dhigan 4.68% wadarta guud. Dhexdooda, waxaa jira qiyaastii 972000 gawaarida korontada iyo 232000 gawaarida isku dhafan.
Horumarka xoogan ee gawaarida cusub ee tamarta adduunka ayaa sare u qaaday horumarinta warshadaha batroolka lithium-ion. Baaxadda shixnadda batteriga lithium-ion ayaa kordhay 16.6% marka loo eego sanadkii ka horreeyay, waxayna gaartay 116.6gwh sanadka 2019.
Sanadkii 2019, 62.28gwh baytariyada lithium ayaa lagu rakibay Shiinaha, ilaa 9.3% sanadkii sanadkii. Iyadoo loo maleynayo in soosaarida gawaarida tamarta cusub ay noqon doonto 5.9 milyan sanadka 2025, baahida loo qabo bateriga korontada waxay gaari doontaa 330.6gwh, CAGR wuxuu kordhi doonaa 32.1% halka 62.28gwh uu yahay 2019.
12v Lithium Ion Batariga dib loo soo celin karo, 12 Volt Xidhmada Laydhka Lithium Dib u Soo Celin Kara, Li Battery, 18650 Nimh, Batariga Lithium Ion Polymer, 3.7 Batariga dib loo buuxin karo, Dhammaan Alaabooyinka